Sudan: Kala go aan laga nixi doonin | isbeddel
← Taamilo (2008)
Dagaalkii rajada →
Sudan: Kala go aan laga nixi doonin
In ay koonfurta Sudan ka go’do waqooyigeeda, waxa la sheegay in la bilaabay horraantii siddeetannadii. Waxa qorsheeyay kala go’aa Sahyuuniyadda caalamiga ah. In kasta oo dhacdo kasta oo xun oo dunida muslinka ka dhacda aanay Yahuuddu ka danbayn, haddana waxay yaqaannaan sida dhacdooyinkaa looga abdaysto. Iyada oo qorshaha Yahuuddu ahaa in labaatan sano dabadeed, 2000-ka, la kala jaro Sudan haddana waxa ka soo dhexgalay afgenbigii Islaamiyiintu ku kaceen 1989-kii. Taas oo keentay hakin ilaa shan sanno ah. Islaamka siyaasiga ah (Sunniga) masraxii ugu dhowaa ee lagu meteli kari lahaa waxa uu ahaa Sudan, waxase taas dhicis ka dhigay cabudhintii askartu ku sameeysay xorriyadaha dadka. Waxa la isu ogaa in qarsoodi lagu wado oo loo dhigo sidii afgenbi millatari oo caadi ah oo kale hoostana laga wato mashruuca islaamaynta dawladda, laakiin sida ay carabtu tidhaa “Inqalaba as-sixru cala as-saaxir” oo askartii ayaaba laga furfuri kari waayay maamulkii, dabcan dhaqankii askarinnimona way sameeyeen.
Xasan at-Turaabi ayaa xalay barnaamijkii Filcumq ee al-Jasiira ka hadlay sidii uu islaamka siyaasiga ahi ugu guuldarraystay hoggaaminta dadka. Taariikhduna waxa ay far waaweyn ku qortay: In cid kasta oo xuquudooda asaasiga ah la duudsiyo ay ku danbaynayso guuldarro la wadaago…Eeg Soomaaliya (Saxariirintii lagu sameeyay Waqooyiga maxaa ka raacay?), Ciraaq (Cabbudhintii Kurdida Ciraaq waxa ka dhashay in woqooyiga Ciraaq go’o 1991) iyo Sudan oo maalmo dabadeed noqon doonto laba dawladood. Sunnaha taariikhdu isma dhalanrogo, wakhtiguna ma naxariisto…Meelo badan oo dunida muslinka ah waxa loo sii tukubayaa kala go iyo kala baad…Bal aan eegno rubuca hore ee qarnigan waxa uu la yaab inoo soo sido -haddii nafta la innoo daayo-.